दुर्गेश थापा, प्रीती आले, ज्योती मगर जस्ता कलाकार समाजका कुतत्व हुन…भिडियो हेर्नुहोस – Khabar PatrikaNp
July 31, 2020 317
गीत संगीत भनेकै दर्शकहरुलाई मनोरंजन र चेतना दिने एक खालको सन्देश पनि हो । देश कोभिड–१९ को महामारीको चपेटामा परेता पनि नेपाली नारीहरुको महान चाड हरितालिका तिजको अवसर पारी अधिकाशं तिज गीतहरु बजारमा उपलब्ध भैरहेका छन् ।
केहि गीतहरु मन छुने र रमाइला छन् भने केहि गीतहरु बिबादमा परेका छन् । नेपाली नारीहरुका जनहितको लागि आवाज उठाउने सिर्जना वाग्लेले केहि आपत्ति जनाएकी छन । सन्धर्भ दुर्गेस थापाको तिज गित ‘बीच बिचमा ३’ गीतको हो । सिर्जना वाग्ले भन्छिन यस गीतले सकारात्मक संदेश भन्दा नकारात्मक संदेश धेरै जान्छ ।
हरितालिका तिज भनेको ब्रतले श्रिङ्गगरिएको हुन्छ तसर्थ नारीहरुको खिल्ली उडायको जस्तो देखिन्छ । उक्त गीतको म्युजिक कभर फोटो सार्बजनिक भय संगै बिबादमा परेको थियो । बिबादमा परे संगै दुर्गेश थापाले भनेका थिय यो एक गाइजात्रे तिज गीत हो नकारात्मक सोच नाराखिदिनुहोला ।
सिर्जना वाग्लेले दुर्गेश थापालाई ठाडो चुनौती दिएकी छिन । केहि समय अघि मात्र चर्चित पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा गायक दुर्गेश थापाले अन्तरबार्ता दिदै गर्दा नारायण गोपालको गित गाउन अनुरोध गर्दा भक्तराज आचार्यको गीतलाई नारायण गोपालको गित भनेर गाए । त्यसको पनि सर्बत्र आलोचना भएको थियो ।
वाग्लेले दुर्गेश थापा सँगै सोफिया थापा, प्रीती आले, ज्योती मगर लगयतलाई कुतत्व भन्दै संगीतिक क्षेत्रलाई खिल्ली उडाएको आरोप लगएकी छन । यस्ता गीत भोली पनि आउँछन र म हेर्न सक्दिन भनेकी छन ।
उनले दुर्गेश थापालाई सच्चिन आग्रह गर्दै ज्योति मगरलाई के हो त्यो ? यती धेरै ऐतिहाँसिक महत्व बोकेको पर्वलाई अर्धनघ्न भएर खिल्ली उडाउन मिल्छ भनी प्रश्न गरेकी छन ।
बाँकी कुरा तलको भिडियोमा हेर्नुहोला :-
Prev३ करोड लगानी गरेर यस्तो चलचित्र बनाउँदै दीपक र दीपाश्री
Nextसाढे तीन लाखमै नेपालमै बन्छ यस्तो आकर्षक घर ! पुरा पढनुहोस
घाटामा रहेको प्राधिकरण पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने संस्थान बन्याे : कुलमान
साह्रै दु;खद खबर: २१ वर्षीय दिनेश साउदको मङ्गलबार करेन्ट लागेर निधन
डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच सहमति भएपछि डा केसीले अनसन तोडे
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (34127)
अन्तत अनिशाले धुरुधुरु रुदै भनिन – ‘म कन्चनलाई अझै पनि माया गर्छु’ (पुरा भिडियो हेर्नुहोस) (34041)
नन्दा सिंह को आखा बाट अन्धकार हट्यो पहिलो चोटि संसार देख्दा खुसिले रोईन (भिडियो हेर्नुहोस) (20231)